Boky atolotra avy amin'ny mpanoratra marobe
Ny boky tsara indrindra amin'ny mpanoratra maro. Ny boky tsara indrindra ho an'ny karazana literatiora rehetra. Boky tena ilaina.
Ny boky 3 tsara indrindra nosoratan'i Michel Houellebecq
Tsy misy tsara noho ny fanolorana fitantarana mampiady hevitra mba hanairana ny te hahafanta-javatra sy hampanakaiky ny mpamaky bebe kokoa amin'ny sanganasa izay, amin'ny farany, mendrika ny lanjany amin'ny volamena. Paikady na tsia, ny tiana hambara dia satria i Michel Thomas, ny tena anarany mpanoratra, dia namoaka ny tantarany voalohany tamin'ny trano famoahana ...
Ny boky 3 tsara indrindra nosoratan'i Henry Roth
Iray amin'ireo tranga vitsivitsy izay ahafantarana ny mpanoratra rehefa maty izy. Caprices amin'ny anjara na hafetsen'ny fahaterahana amin'ny fotoana tsy mety. Ny zava-misy dia i Henry Roth Okrainiana tany am-boalohany dia ilay literatiora mahazatra ankehitriny izay tsy ho niahiahy azy velively. Ary angamba…
Boky 3 ambony an'i Alice Munro
Ny tantara fohy sy ny tantara dia nahatanteraka ny fihaonana an-tampon'ny literatiora mendrika azy ireo tamin'ny taona 2013 rehefa nomena an'i Alice Munro ny loka Nobel ho an'ny literatiora tamin'io taona io, ireo tantara fohy rehetra ireo dia teo anelanelan'ny zava-misy sy ny foronina araka ny fironany ho lehibe kokoa noho ny ny tantara mihitsy na ny tantara, nifarana ...
Boky Paul Pen 3 tsara indrindra
Indraindray dia nahomby ireo fanekena. Rehefa nandresy ny New Talent Fnac 2011 i Paul Pen, dia nety ho nisy feo vaovao manana ny maha izy azy sy ny tolo-kevitra fitantarana miavaka hipoitra avy amin'ny ranomasin'ireo mpanoratra izay nandosiran'ny mpitantara tantara maro hafa, ny hafa kosa tsy dia be loatra ...
Ny boky 3 tsara indrindra an'i Nacho Ares
Ny tantara dia manome fialofana ho an'ireo karazana angano, angano ary nahoana no tsy izany, ary koa ireo mistery izay manana endrika azo antoka. Satria na iza na iza miditra amin'ny tontolo fahiny mba hahita dia afaka mahita mora foana toerana mampiady hevitra eo anoloan'ny tantara ofisialy. Avy amin'ny soratra apokrifa isan-karazany ka hatramin'ny…
Boky tsara indrindra 3 nataon'i Pierre Lemaitre
Ohatra vaovao iray amin'ny mpanoratra tara-asa, ary mpanentana vaovao amin'ny maceration miadana ho an'ny literatiora kalitao. Misy mpanoratra toa an'i Pierre Lemaitre izay niaraka tamin'izy ireo foana ny literatiora, angamba tsy fantany akory. Ary rehefa mipoaka ny literatiora, rehefa tsy maintsy ilaina ny manoratra ...
Boky 3 tsara indrindra an'i Clare Mackintosh
Avy amin'ny polisy nandritra ny 12 taona mahery ka hatramin'ny tonian-dahatsoratry ny gazety alahady malaza any Britain, ny Sunday Times. Ary ankehitriny, tsy isalasalana fa iray amin'ireo mpanoratra naharesy anglisy izay manomboka miakatra ny lisitra bestseller manerana an'i Eropa. Ny marina dia nanomboka i Clare Mackintosh ...
Tantara telo tsara indrindra an'ny Orhan Pamuk
Istanbul dia manana hatsarana manokana hamintinana ny tsara indrindra amin'ny Andrefana sy Atsinanana. Iray amin'ireo tanàna vitsivitsy fantatro fa afaka mitazona ny fanahiny tsy tapaka ho an'ny ankafizin'ny mpitsidika fa kosa manokatra ny rivotra vaovao avy any amin'io sisin-tany voajanahary eo anelanelan'ny Eropa sy ...
Boky tsara indrindra 3 nataon'i Alicia Giménez Bartlett
Ny asan'i Alicia Giménez Bartlett dia manodidina ny toetran'ny Petra Delicado, farafaharatsiny hatramin'ny nivoahany ny sainy tamin'ny 1996 niaraka tamin'ny sanganasa Rites of Death. Miaraka amin'ity toetra amam-panahy ity dia ampidirin'ny mpanoratra ao anaty sokajy polisy Espaniola ny vehivavy manana zo feno sy tanjaka tanteraka. Aorian'ny…
pejy1 pejy2 ... pejy147 manaraka →